I-Ecommerce: ukuphuculwa kweenjini zokukhangela okanye i-aesthetics?
Namhla, ihlabathi lanamhlanje le-ecommerce search engine optimization liye laba ngumqolo wokusebenza ngokukodwa nayiphi na ishishini lokuthunyelwa kwe-intanethi ye-world scale. Ukuze uphumelele kule nto, kwaye wenze iprojekthi yakho yokurhweba isebenze ngokuchanekileyo uya kufuna ukuqonda okufanelekileyo kunye namava amaninzi kwiinkalo zombini - i-ecommerce kunye nokuphuculwa kweenjini zokusesha, kakhulu kwaye kunzima ukuphathwa ngongenamava kunye nabangenalwazi abanamashishini abasebenza kwi-intanethi.
Mna, andinalo inhlanhla ukuyilawula yonke loo nto. Enyanisweni, kuthatha iminyaka engaphezu kwe-8 yokusebenza kanzima ukuphatha iindiza ezili-enterprise-scale based based on various frameworks for ecommerce kunye neendlela zokucwangcisa injini.Kwaye ndandisoloko ndijongana nayo yonke into enokuyicingayo - ngokuqala ngeendlela ezininzi zokutya, kwii-tech-tech.
Okokuqala kwaye mhlawumbi into ebaluleke kakhulu ukuba ndiyazi ukuba isabelo seengonyama kuzo zonke iiprojekthi ze-intanethi ezixhomekeke kwiimeko zidla iimeko ezinokufaniswa kunye neminye efanayo ye-injini yokukhangela injini - servis arçelik. Ndiyathetha ukuba kungakhathaliseki ukuba ngabadlali abajoliswe kuyo okanye i-market niche ekhethiweyo, ukubonakaliswa okuphezulu kwi-intanethi, eqhuba i-traffic ephezulu yobunjani, ekugqibeleni kubangela ukuphuma kwemali engenayo-bonke baxhomekeke kwindlela yokucwangcisa ngayo i-intanethi yokucwangcisa injini ye-ecommerce. umphathi weprojekthi, okanye ngumnini-shishini.
Akunakucinge ngakumbi kwi-SEO
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, masijongane nayo - ininzi yeeprojekthi ezihambelanayo zichaphazelekayo ngokwenza izigqibo ezingalunganga ngokuphuhliswa kwazo emva kokuqalisa. Ndiyathetha ukuba abachaphazelekayo bezoshishino banokuqhuba amabhizinisi abo kwi-intanethi ikakhulu ngokubhekiselele kumava omsebenzisi angcono kunye nokuphequlula i-aesthetics jikelele, kunokuba batyelele kwindlela efanelekileyo ukuya kwi-intanethi efanelekileyo yokukhangela injini.
Kuthetha ukuba ngumntu okhululekileyo kunye naso sonke
Masicabangele imeko enjalo, xa igama elitsha lomnxeba lithatha ngokungalunganga kugxininise ekwenzeni indawo ekhangayo kwaye isebenzayo kuphela, ngaphandle kokugxininiswa ngakumbi kwi-injini yokukhangela injini ( SEO). Ngaloo ndlela, lonke ishishini liza kuba ludinga ukusuka ekuqaleni, i. e. , ukungahoywa ngamathuba okubandakanya abathengi abaninzi abanokubakho ngqo kwii-organic channel, eziza kuphuhliswa zibe ngumlinganiselo ozinzileyo wabathengi bexesha elide. Kodwa apha kuza isiqwenga seendaba ezilungileyo-akukho sidingo sokuziva sidaniwe, nokuba ngaba usandul 'ulapha okanye uvakalelwa kukuba unesiqiniseko esaneleyo kwimeko ye-ecommerce yokukhangela injini. Ngezantsi ndiza kubhala uluhlu oluthenjisiweyo olwenziwe ngetyenziso olusuka kumava am namava kwaye, ngokuqinisekileyo, ngokusekelwe kwimiphumo yam yangaphambili. Ndiyathemba ukuba iingcebiso ezifutshane zilandelayo ziyakunceda ukwakha iphrojekthi ephumeleleyo yoshishino ngokusekelwe kwelinye lazo zikhokelo ze-ecommerce zanamhlanje, ziyaqhubeka ziyaziwa kakhulu.
Sebenza kwiingcaciso ezikhethekileyo zemveliso
Okokuqala, ukuba kunokuba zonke iimveliso ezintsha zilawulwa ngabantu abalungileyo ngolwazi lwezakhono zabo okanye iinkonzo. Nangona kunjalo, ezi ngcali zingaphakathi zivakalelwa ukungabikho kwengqiqo malunga nenjongo yokuphucula i-ecommerce injini kunye nokusebenza kwayo. Ngaloo ndlela, iinkcazo zabo zeemveliso zihlala zibonakala zingekho phantsi, okanye zinokutsalwa ngokuthe ngqo kumvelisi. Ngenxa yoko, ayingekho yodwa, ifundisa okanye ngandlela-thile inxaxheba-ezi nkcazelo azisoze zinikeze umgangatho ophezulu wemveliso obonwe kwizinto eziphambili zokukhangela.
Yingakho unconywa ukuba usebenze kakuhle kwiinkcazelo zakho zemveliso ukuba "zithethe" kubaphulaphuli abajoliswe kuyo, ukufanisana nezicelo zokusesha eziqhelekileyo zamagama akwii-key kunye nemigca eyintloko, kwaye imela izinto ezithengiswa kwiindawo ezigqibeleleyo kunye nendlela yokubamba ngamehlo ngexesha elifanayo. Kungakhathaliseki ukuba yimveliso okanye iinkonzo ojongene nazo, zichaze iinkcazo zakho ngaphakathi kwamazwi angama-150 ukuya kuma-300 ukuhlangabezana nomxholo we-semantic ephakathi kwi-ecommerce search engine.Ukuba kwenziwe ngokuchanekileyo, iinkcazelo zakho zemveliso ziza kusebenza kakuhle ngokubandakanyeka abathengi abaqeqeshiweyo ngokuthe ngqo kwiziphumo zophando lwe-organic.
Gcina ukuthumela ukuhlaziywa kwemveliso
Ukuba nganye into enikezelwa ngoshishino wakho efakwe ngokuphononongwa ngokuxhasayo yindlela enkulu yokuphucula ukufaneleka kwamaphepha akho emveliso. Enyanisweni, into evelele kakhulu enikezela ngayo ukuthengiswa, ukuphonononga ngakumbi kunye nezikhokelo ezifundisayo kufuneka kuqhutywe ukuguqula ukuguquguquka okukhulu emva kwayo yonke into. Ukuthumela iimvavanyo zakho zeemveliso, ungasebenzisi nanoma yimaphi amaphepha okuthengisa kwansuku zonke, qulunqa ukunika ulwazi olongezelelekileyo olusekelwe kwimeko yamava obukhoma kunye neziphakamiso zakho ezixabisekileyo. Njalo yenza konke okusemandleni akho ukubandakanya ukuphononongwa ngakumbi kunye nobufakazi. Ukwenza njalo, iimveliso zakho ziza kuba nexabiso elongezelelweyo kunye negunya elinamandla ukusuka kwimbono ye-ecommerce yokupakisha injini, ekugqibeleni ukuqhuba ukuguqulwa okukhulu.
Ungalokothi usebenzise kakubi amagama angundoqo
Ndithetha ukuba akufanele uhambe ngokude uzalise umxholo wakho wekhasi lomkhiqizo ngamagama angundoqo, ngokungangoko kunokwenzeka. Ulibale le ngcamango, ayiyi kuyenza. Enyanisweni, awukwazi ukutsala iindwendwe ezingaphezulu kwezinto okanye ukuphucula igunya lakho elingundoqo - ngokufakela iinkcazo zakho zemveliso kunye nemininzi yamagama abalulekileyo kunye namagama abalulekileyo. Esikhundleni saloo nto, kufuneka uqhubeke usebenza kumxholo ochaphazelekayo kunye nolunengqiqo oza kunika ixabiso ngakumbi kubaxumi bakho, ukuhlangabezana neemfuno eziphambili ze-ecommerce ukukhangela injini ngexesha.
Ekugqibeleni, yenza ezinye izinto ezijoliswe kwi-SEO
ndithetha apha ukuba ufanele uzalise iimpawu zemifanekiso yakho, ukwandise ii-URL kunye nokudala Iimpawu ezizodwa kunye ne-sitemap efanelekileyo. Okokuqala, vumela iinjongo zokukhangela ziqaphele umxholo wakho wokubonwa ngokufumana yonke imifanekiso ebanjwe kumaphepha akho emveliso afakwe kwiitrali ze-alt ezinika inkcazo ecacileyo, exhaswa ligama elingundoqo kunye nokunikezela ukukhankanywa kwigama lakho.
Okwesibini, yakha izihloko ezikhethekileyo ezixhaswe kunye neetekisi eziphathekayo kuphela. Qinisekisa ukuba awunakho ukuphindaphindiweyo okanye ukuhlambalaza apha. Ngokulandelayo, qhawula ii-URL zakho ezingenanto ezingakumbi kwizinto ezifundisayo, kubandakanywa amagama awona mveliso kunye noluhlu lwayo. Ekugqibeleni, ukwenza ulungelelwaniso olulungileyo lwe-ecommerce ukukhangela injini kuya kufuna ukuba uqiniseke ukuba imisebenzi yakho yemihla ngemihla ihlaziywa ngokugcwele kwaye ihlawulwe kakuhle ngabaxhamli. Ngoko, ungalibali ukudala i-sitemap eguqukayo. Okanye unako ukufaka isicelo seNkqubo zoLwazi lweeNkcukacha eziDumileyo kunye nezicwangciso ezizenzekelayo ezizenzekelayo, eziqhelekileyo ezisetyenziselwa izikhokelo zentengiso ekhompyutheni.